Izincwadi - Izindaba Zokubhala | Izindaba Zezincwadi (Ikhasi 8)
Imincintiswano yezincwadi eSpain phakathi nenyanga ka-Okthoba: Izinsuku zisondele kakhulu!
Abaphumelele kumaHarvey Awards 2015.
Umdlalo wokubhala (I): Ungangitshela ukuthi iyiphi yalezi zingcezu okungezakho? Izingcezu eziyi-10, izincwadi eziyi-10. Ungalokotha?
"Iseli labangenacala - Izinsolo zamanga zokuphathwa kabi, iqiniso elifihliwe" (I-Editorial Círculo Rojo) iyincwadi enesiqalo sikaFrancisco J. Lari.
Namuhla kugujwa iminyaka engu-125 kwazalwa u-Agatha Christie, indlovukazi yohlobo lwamaphoyisa. Lapha sincoma amanoveli amahlanu amahle kakhulu wombhali.
Okwakamuva okuvela ku-Ángeles Caso manje kuyadayiswa: "Wonke lowo mlilo", indaba yababhali abathathu abanesibindi emhlabeni wamadoda abelana ngothando oluyimfihlo.
Ezinyangeni ezingaphezudlwana kwezimbili ezedlule, ikakhulukazi ngoJulayi 7, ngishicilele i-athikili efinyelele kwinani eliphezulu ...
Uma ungumthandi wezinganekwane ezimnandi futhi "ufa" ngokoqobo ekufundweni okuluthayo, i-trilogy ethi "The Sermon on Fire", kaFrancesca Haig, izokujabulisa.
"Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono" yamuva evela kuLaurent Gounelle, inoveli ezokufundisa ukujabulela yonke imizuzu yokuphila. Ku-Planeta Yokuhlela.
Thola izindaba zokuhlela i-Editorial Alba ezilungiselele ukwethula lo Septhemba 2015.
Buyekeza i- "The magpie in the snow", inoveli yokuqala ka-F. Javier Plaza, inoveli eyenzeka kwi-impressionist eParis ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX.
Iwebhusayithi yeFlavorwire ifake i-'Hopscotch 'kaJulio Cortázar phakathi kwemisebenzi engama-50 eyinkimbinkimbi kakhulu yabafundi.
"Ngaphandle kokubhuka", nguNoe Casado (Esencia / Planeta) utshela impilo eyisicefe yowesifazane oguqulwa ngendaba emangalisayo yothando nobulili obumnandi.
I-Expotaku Tarragona 2015.
ITuuu Librería isitolo sezincwadi sobumbano esinezikhungo eziningana eMadrid lapho ngayinye ikhokhela izincwadi lokho ezikufunayo.
Ama-Harveys ka-2015 asevele enamagama aphakanyisiwe.
Ipulatifomu yokufunda yedijithali i-24symbols muva nje yabelane ngohlu lwezincomo zezincwadi eziyi-10 ezizofundwa kuleli hlobo. Zitholele!
Enye yezingcaphuno zemibhalo: imishwana namacaphuno adumile abonwa ezincwadini ezaziwayo. Ingabe kuzwakala ujwayelekile kuwe?
I- "Land of Dreams" kaJames Nava iyindaba ekhuthazayo, ethokozisayo, enamandla futhi enothando ngokuzithuthukisa nokulwa nobunzima.
"Ngesikhathi lina", entsha nguTeresa Viejo, iyinoveli yezindaba zothando ezingapheli nezimfihlo zomndeni. Sithola okuningi ngale noveli.
Sikhuluma nge "Intombazane Esitimeleni", isimanga esingokwengqondo ngendaba esheshayo egxuma umfundi ekhasini lokuqala.
Ukufundwa okunconyelwe leli hlobo lango-2015: Faka incwadi yakho esikhwameni sakho lapho uya olwandle noma echibini futhi ngaphezu kokuphumula, funda!
UDestino Juvenil ushicilela inoveli ethi "Ngifundise isibhakabhaka", ebhalwe nguLof Yu, indaba efingqiwe kakhulu yabafundi abasebasha, entsha, yamanje neyothando kakhulu.
"Le ncwadi ibhalwe nguwe", ebhalwe nguCarlos García Miranda, eSpain, iyincwadi enezinselelo zokuqala ezingama-78 zokubhala. Ku-Espasa Yokuhlela
Ku "La Favorita" u-Aurora García Mateache uxoxa indaba yothando phakathi kuka-Alfonso XII nomculi we-opera u-Elena Sanz. Emkhakheni Wezincwadi
Indlu yokushicilela yaseParis ishicilele uhlelo lwefekisi lokuphrintwa kwe-'The Flowers of Evil 'ngezilungiso ezibhalwe ngesandla zikaBaudelaire.
Laba ngabalingisi abali-19 abaphethe isifanekiso samaHollywood Academy Awards abasebenze ekulungiseni umdlalo wamahlaya weMarvel.
Okwakamuva okuvela kuMegan Maxwell kufika: "Sawubona, uyangikhumbula?", Umsebenzi wakhe osondelene kakhulu, osuselwa endabeni kanina futhi egcwele izikhathi ezingokomzwelo
Ngo-Agasti 2016, nangemva kokukhonjiswa kwe- 'Batman v Superman: Dawn of Justice' ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ifilimu ethi 'Suicide Squad' izongena ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini.
INubico, elinye lamapulatifomu okubhekiselwa kuwo okufundwa kwedijithali ngaphansi kwemodeli yokubhaliselwe, ehambisana neholide ...
Uyasibona lesi sicaphuno? "Ingqondo idinga izincwadi ezifana nenkemba ephuma etsheni lomgogodla, ukuze ihlale emaphethelweni. Yingakho ngifunde kakhulu."
Sikushiya nohlu lwamasayithi ongalanda kuwo izincwadi mahhala. Kukhona amawebhusayithi ahlukene angama-30, lapho uzothola khona i-ebook oyidingayo.
I-Bebookness iyipulatifomu yokuqala ngeSpanishi ekuvumela ukuthi ushicilele i-ebook ezitolo ezinkulu eziku-inthanethi, njenge-Amazon, iBooksgtore, Kobo, ...
Izinzuzo zokubhala ngobuciko ziningi. Lapha sikutshela ezinye zazo.
Sikulethela imincintiswano emithathu yezincwadi zomhlaba wonke ngoMeyi. Thola ukuthi ungabamba iqhaza kanjani lapha nenhlanhla!
Imincintiswano kazwelonke yezincwadi ngoMeyi ongabamba iqhaza kuyo. Shesha! Abakavali okwamanje.
UJulia Ward Howe (1819-1910) wayeyisishoshovu esidumile samalungelo abesifazane futhi engumbhali okuvela kuye umqondo wokugubha uSuku Lomama.
Amabinzana amahle avela ezincwadini akusiza uzindle ngalokho abakushoyo. Ucabangani?
Yize uDon Quixote kuwumsebenzi womhlaba wonke, awuzange ufike eChina kuze kube ngu-1922. Namuhla sisondela kancane ukufika kwawo eMpumalanga kanye nelukuluku ... premonitory?
Namuhla sifuna ukuhlonipha owesifazane owenzele okuningi ezincwadini nasemasikweni: UMaría Moliner, umtapo wezincwadi, isazi semithetho yezilimi nomlobi weDikichiniki Yokusetshenziswa.
Izikhungo ezingamashumi amahlanu zamasiko eSpain ziyahlangana kokuhlangenwe nakho kokubhuka izincwadi ukuze 'zikhulule' amakhophi angaphezu kuka-2000 ngoSuku Lwezincwadi.
Ungamnika yiphi incwadi ...? Kubo bonke abantu abathandekayo abathanda ukufunda njengawe: umlingani, abangane, abazali, ...
Izincwadi zamanoveli zobugebengu ezilinganiswe kakhulu ngabafundi. Uke wakufunda? Ngabe ucabanga ukuthi abanye kufanele babe kulolu hlu? Sitshele kumazwana abekiwe.
Izincwadi okufanele uzifunde emahoreni ambalwa: ziyalutha futhi zimfushane kangangokuthi uzoziphuza ...
Imincintiswano yezincwadi zomhlaba wonke ngo-Ephreli. Ulindeni? Qhubeka futhi ubambe iqhaza!
Imincintiswano yezincwadi ka-Ephreli eSpain: usengabamba iqhaza.
Ucwaningo oluthile luthi umuntu oyedwa kwababili baseBrithani ufuna ukuba ngumtapo wolwazi. Namuhla sidiliza izizathu zokuthi kungani ukuba ngumtapo wolwazi kungapholile kangako.
Sincoma izincwadi ezi-5 okufanele zifundwe ngePhasika. Jabulela lezi zinsuku zokuphumula okufanelekile kahle.
Ukuxoxisana noRafael Santandreu, isazi sokusebenza kwengqondo nomlobi we "The glasses of injabulo" kanye "The art of not making life bitter".
Sikushiya amathiphu ayi-10 avela kuJulio Cortázar wokubhala izindaba. Ilungele ababhali.
Uhlelo lwethelevishini lukhiqize uhlu olunamagama angama-43 asunguliwe futhi enziwa ngababhali abaziwayo nababalulekile njengoTolkien noma uMoro
Umenzeli ovikelekile, kaJames Nava, uyinoveli ejabulisayo nejabulisayo, lapho singathola khona izinhlobo ezahlukahlukene ezihlangene endabeni yamanje.
Namuhla uchungechunge lwezeluleko zababhali abavela kuJorge Luis Borges. Ufanelwe yimuphi umbono?
Ama-movie asuselwa kumakhomikhi, ikakhulukazi lawo kaMarvel, athole inani elikhulu lokuphakanyiswa kuma-Saturn Awards ka-2015.
Namuhla siphakamisa umbuzo wokuthi sizithola kanjani izincwadi, imitapo yolwazi iyisikhungo esiyinhloko lapho kufundwa khona ingane yokufunda.
Izincwadi 'ezenziwe e-Andalusia' ziyisiqeshana semibono, esihlekisayo nesibhuqayo, lapho kukhunjulwa khona ababhali abaningi base-Andalusia.
Ukubuyekezwa: «Umgcini wezinwele weBlue Division», nguJosé Ignacio Cordero
I-Hairdresser yaseBlue Division yindaba elandisa ngokusinda kwendoda elula ebukeka ...
"Insularity, uhambo lwangaphakathi lomgijimi", nguRalph del Valle, yindaba ejulile, egcwele ama-nuances nemibono. Ungaphuthelwa isibuyekezo.
Indlu yokushicilela ye-RBA iphinda ithumele amanoveli ka-Agatha Christie futhi senza ukubuyekeza okufushane ngeminyuziyamu enikezelwe kumbhali wase-United Kingdom.
Ababhali abaningi basebenzisa i-twitter ukuzenza baziwe nokufinyelela abafundi abaningi. Sikunikeza amathiphu wokusebenzisa kahle le nethiwekhi ye-microblogging.
UMegan Maxwell wabelane nabalandeli bakhe izihluthulelo zempumelelo yakhe emhlanganweni wedijithali lapho abuye waveza khona ezinye izimfihlo ezingenakulibaleka.
Buyekeza futhi uhlasele i- "The Dream Interpreter" kaRafael R. Costa, incwadi enhle.
Isimo salolu chungechunge lwethelevishini sesiphila ebudaleni baso, kucatshangelwa lokhu sincoma incwadi ongayifunda uma ngabe uyaluthanda uchungechunge lwethelevishini ...
U-Elysion, inoveli yokuqala ka-Aida Herrera (i-Editorial Círculo Rojo) izosicwilisa othandweni olungenamibandela nemfihlakalo.
Yini okufanele uyifunde? Sazise emazwaneni futhi sizoxoxa ngawo.
Namuhla kuyaqhubeka ukudayiswa 'Izinyawo zakho zithinta umthunzi nezinye izinkondlo ezingashicilelwe', incwadi eqoqa izinkondlo ezingama-21 ezingashicilelwe zikaPablo Neruda.
Kuwo wonke u-2014, sekukhishwe iziqu ezinkulu. Yiziphi izincwadi ebezincono kakhulu, noma okungenani, ezifundwa kakhulu nezenenani eliphezulu?
Ekupheleni konyaka abantu abaningi babheka emuva babala izincwadi abazifundile. Namuhla sikubuza ukuthi zingaki izincwadi ezishiye umaki kuwe.
Ukubuyekezwa kwe- 'The heart of the condor', nguFrancisco Núñez Roldán, inoveli eshicilelwe ku-Ediciones Áltera, eyabhalwa ngekhulu lama-XNUMX eYurophu
Namuhla sikulethela le ngxoxo no-Ángel Delgado, umbhali wezincwadi eziningi ezizishicilele. Amahlaya
Indlu yokushicilela yakwaReino de Cordelia ikhiphe uhlelo olusha nolusezingeni eliphezulu kakhulu lwe-Bram Stoker's Dracula ngemifanekiso kaFernando Vicente
Kuklonyeliswa ama-Ignotus Awards ka 2014. Ucabangani wena?
Bukeza bese Udweba incwadi ethi 'Criticisms and Chronicles on The Secret of Puente Viejo', kaJosé Ignacio Salazar Carlos de Vergara, eyanyatheliswa ku-Ediciones Áltera
Namuhla sihlaziya ku-Actualidad Literatura impumelelo enelukuluku yencwadi ethi "Destroza este diario" kaKeri Smith.
Ukubuyekezwa kwe-'Grey Wolf ', inoveli yesithathu kaJames Nava, eyashicilelwa okokuqala ngo-2008 futhi yashicilelwa kabusha ngoNovemba 2014 yiSniper Books.
Kulesi sihloko ungayijabulela ingxoxo u-Ana Patricia Moya, umqondisi nomqambi weGreenland Magazine, asinike yona.
Umbhalo wanamuhla ubhekiswe kwabancane nabazali babo: Izincwadi Zezingane ngosuku lwezingane.
Isiphetho esidabukisayo sezingane zamaKhosi amaKhatholika ngumsebenzi uhhafu wenoveli yomlando ositshela ngempilo ka-Isabel, Catalina, María, Juana noJuan.
UFnac no-Ediciones Salamandra bahlanganise uhlelo lwe-VIII lwe-International Graphic Novel Award eSpain.
Uma uthanda izindaba eziyimfihlakalo, ama-thriller namanoveli amnyama uzothanda uhlu lwezincwadi eziphakanyiswe yi-Amazon neGoodreads. Sibona iTop 10
Sekuvele kunabaphumelele eHarvey ngo-2014.
Ikhulu leminyaka lokuqala kweMpi Enkulu selifikile nokuthi iyiphi indlela engcono yokukhumbula kunokufunda imisebenzi emithathu emikhulu kuleli qiniso lomlando.
Ngabe ubhalisela noma iyiphi yale mincintiswano yokubhala? Awulahlekelwa yilutho ngokuzama! Impela imisebenzi yakho engaphezu kweyodwa ifanelwe le miklomelo.
Uma uhlala ukhononda ngokungabi nesikhathi sokufunda, nakhu ukufundwa okufushane okuyisihlanu ngempelasonto. Uphelelwe izaba!
Ukugxekwa kwezindaba zikaWalt ​​Disney: ucezu lombono, ngekusasa elingcono nemfundo. Ngaphandle kokuya ocansini nangaphandle kokuhlukaniswa.
Uma ucabanga ukuthi akukho mehluko obalulekile phakathi kwezincwadi ezinhle nezimbi futhi okubalulekile ukunambitheka komuntu ngamunye, le indatshana yakho.
I- "Lecturas para el verano" yindatshana lapho sincoma khona ezinye izincwadi ongajabulela ngazo lamaholide azayo.
Izincwadi eziyi-10 ezinconywe kakhulu ukuthi kube ukuphela kwazo okumele zibe nazo. Ungangitshela ukuthi iziphi ezakho? Ngingathanda ukwazi.
Izincwadi ze-Romanticism eSpain zisishiyelani? Ngabe lezi zinhlobo zakudala ezinecala lezothando zisathengiswa?
Ezikhathini zethu, i-Multiperspectivism imfashini kakhulu, ezincwadini nakumafilimu nakumabonakude (Once upon a Time and Game of Thrones).
Isonto elilodwa ku-GRAF 2014.
Namuhla siletha i-anecdote entsha yombhalo okuthi kuleli cala igxile ku-Unamuno
Namuhla siletha i-anecdote entsha yokubhala ethi kulokhu izungeze iValle-Inclán
Namuhla siletha i-anecdote entsha yombhalo okuthi kuleli cala igxile eCela
Namuhla siletha i-anecdote entsha yombhalo kuleli cala ezungeza uJules Verne
Namuhla izingqungquthela zama-XVI Comic ze-University of Alicante ziyaqala.
UJosefina Manresa, unkosikazi kaMiguel Hernandez, ugqugquzele iningi lomsebenzi wakhe wokubhala. Owesifazane onikele impilo yakhe yonke ekusabalaliseni umsebenzi womyeni wakhe.
"I-erolderoi. Sangre en la arena" kaDavid Zanón Sandoval yinoveli yokuqala yombhali omusha owanquma ukuzishicilela ngokwakhe inoveli yakhe eyinganekwane
Kutholwe izincwadi ezimbili zokuqala ze-Insomnia Collection yendlu yokushicilela yaseValdemar
Ingqungquthela ye-VIII FNAC / SD Comiqueras izofika eMadrid kusuka ngoDisemba 9 kuya ku-15.
Uhlu lwemincintiswano yezinkondlo ngoDisemba 2013
UMax, uJaime Martín, uDavid Aja noCarlos Giménez ohlwini lwamaNgxenye Asemthethweni we-Angoulême 2014.
Lapha sikushiya uhlu oluhle olunemincintiswano yezinkondlo eyenzelwe le nyanga
Ngesikhathi kwethulwa i- "Motorcycles and Bison Grass", u-Actualidad Literatura ube nenjabulo yokuxoxisana noDrew Hayden Taylor, umbhali.
Izintshisekelo ezimangazayo noma amaqiniso athakazelisayo ngomhlaba wezincwadi nezincwadi
Sixoxe ngohlu lwezincwadi eziyikhulu ezihamba phambili zeNewsweek
ISalita del Cómic y la Ilustracion de Cáceres ifinyelela kushicilelo lwayo lwesine, oluzobanjwa phakathi komhla wama-23 no-29 Septhemba.
UMiguel de Unamuno waphila le anecdote ehlekisayo nomfundi wakhe owambuza into enelukuluku ngaphambi kokuthatha ukuhlolwa kwesiGreek
UGarcía Márquez ungumbhali owayehlala enobudlelwano obukhethekile namaphutha esipelingi ...
Incwadi kaFlaubert uMadame Bovary yake yaba imbangela yokuthi umbhali alethwe ecaleni lokuziphatha okubi
Abaphumelele nabaphakanyisiwe imiklomelo ye-Eisner 2013, ama-Oscars omhlaba wamahlaya aseMelika.
UQuevedo ukwazile ukuthuka indlovukazi ... ngaleyo ndlela wazuza ukubheja nomngani wakhe. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ukwenze kanjani lokhu? Qhubeka ufunde futhi uzothola
UFernando Fernán Gómez waphikelela wathumela ukumemeza ukuthuka kumlandeli owacela ngenkani ukuthi azinikezele ngesikhathi sesenzo
Sikulethela i-anecdote mayelana noBorges ophendula ngokuxaka intatheli emtshela ngokudla abantu ezweni lakhe ...
UGarcía Márquez kwadingeka aphike ngesikhathi sokubhalwa kwale ncwadi eyaziwayo eyayihamba emhlabeni wonke.
Umklomelo we-VII International FNAC-SINS ENTIDO Award ufika, ovuma ukuthi usebenzela ukuhlolwa kuze kube nguNovemba 29, 2013.
Izivumelwano ezine, zikaDoctro Miguel Ruiz ziyincwadi yabo bonke labo abanentshisekelo endabeni yokomoya
UCamilo José Cela… nekhono lakhe elimangalisayo lokuhluza…
UCela uze waqinisekisa ohlelweni lwethelevishini ukuthi ubekwazi ukumunca ilitha elilodwa nohhafu lamanzi nge-aally ngegalelo elilodwa
Kusukela ngoMashi 14 kuya ku-16, i-XV Comic Conference, eyaziwa kangcono njenge-Unicómic, izobanjelwa e-University of Alicante.
KuRobert Ludlum into yokuqala okwakudingeka yenziwe ngaphambi kokwenza inoveli kwakungabalingiswa
"I-El Vizconde demediadio", umsebenzi omuhle ka-Italo Calvino omlingiswa wakhe ophambili, iViscount yaseTerralba, ihlukaniswe kabili okuholele ekutheni kube nezidalwa ezimbili ezintsha
UHermann Hesse ubhale "Umdlalo Wobuhlalu", umsebenzi osethwe ku-Castalia enhle, lapho umdlalo ukhonza ukuhlanganisa lonke ulwazi
"Abesifazane", ubuciko bukaCharles Bukowski lapho amandla akhe okuguqula uHank Chinaski engumbhali wendaba egcwele ucansi notshwala
Ukubuyekezwa kafushane ngempilo kaVicente Risco, indoda okuvikela kwayo ubuzwe kwakungahlali kwenziwa empilweni yayo yonke
Ukubuyekezwa kafushane ngempilo nomsebenzi wombhali waseGalician uManuel Antonio
Ukubuyekezwa kafushane ngempilo kaNoriega Varela, umbhali we-Do Ermo nelungu lomzabalazo wezolimo
Namuhla kukhona okwenzeke kimi kakhulu yisilo esisha sikaDaniel Estorach Martín. Indaba yamaqhawe amakhulu asemadolobheni.
Ukubuyekezwa kafushane ngempilo yombhali wemidlalo odumile uBuero Vallejo
Ukubuyekezwa kafushane ngempilo kaMiguel Mihura, umbhali owaziwayo wemidlalo yeshashalazi
Ukubuyekezwa ngababhali abakhulu betiyetha yamahlaya aseSpain yekhulu lama-XNUMX leminyaka
Ukubuyekezwa kafushane ngempilo kaJacinto Benavente, umbhali wemidlalo yasespain nowine umklomelo weNobel Prize
Uhlelo lweshumi lwe-Meetings of Professional Illustrators oluhlelwe yi-APIM, kusukela ngomhla ka-13 kuya ku-15 kuDisemba.
Ukubuyekezwa kwempilo kaJuan Goytisolo, umbhali wamanoveli nama-eseyi
Ukubuyekezwa okufushane ngempilo yombhali uRafael Sánchez Ferlosio, umbhali womsebenzi u-El Jarama
Ukubuyekezwa kafushane ngempilo kaCela, umbhali owazalelwa e-Iria Flavia okwazile ukuwina indondo yeNobel
Ukubuyekezwa kafushane ngempilo yombhali uJames Joyce owayeguquguquka kakhulu maqondana nezinhlobo zomsebenzi wakhe
Ukubuyekezwa kwempilo kaRamón María del Valle-Inclán, umbhali odume umhlaba wonke waseGalician
Ukubuyekezwa kwempilo ka-Azorín, umbhali kanye nentatheli owaqala ukuba yi-anarchist wabe eselandela
Amanothi amafushane omlando womlobi omkhulu waseSpain uGabriel Celaya
Kulesi sihloko sisondela ezenzakalweni ezinkulu zokuphila zombongi odumile waseSpain uDámaso Alonso
Kule ndatshana sifingqa kafushane izigaba zokuphila eziyinhloko zembongi enkulu yaseSpain uRafael Alberti
Umbhali Ohamba Phambili Wokubhala uChris Eliopoulos, Zisabe, Amahlaya Wama-Marvel uLaura Lee Gulledge, Ikhasi NguPaige, Amulet Amabhuku Todd Klein, SHIELD: Abakhi Bezakhiwo…
Ngunyaka owodwa ngalesi sikhathi, kumenyezelwa abaphakanyiselwe ama-Harvey Awards ahlonishwayo, athatha ama ...
Ama-Eisner Awards ka-2012 asevele enabaqokelwe ukhetho. Ukumelwa kweSpain ngalesi sikhathi kufana noMarcos Martín, othanda ...
Kusuka endlini yokushicilela yeBarataria, sithola lolu hlelo olusha lomsebenzi iDebora, lombhali wase-Ecuadorian uPablo Palacio. Imayelana…
IMadrid, Meyi 3, 2012. Ngenhloso yokukhuthaza nokukhuthaza ukukhiqizwa kwemibhalo emkhakheni we ...
INDABA EMFUSHANE KAKHULU "Umlando Omfushane Wendlela Yobuciko Eyaziwa Nge-Hortisculpture," ngu-Adrian Tomine, e-Optic Nerve # 12…
Kuningi okulotshwe ngaleyo nhlekelele enkulu ebangelwe ukufisa nokuziqhenya komuntu wesimanje. Ukucwila kwe ...
Abaphakanyiselwe ama-XXX Barcelona Comic Fair Awards sebemenyezelwe. Iqiniso…
Ngokusho kwewebhusayithi ye-Anime News Network, abaphakanyisiwe bezithombe zohlobo lwe-35th lwe ...
Amarobhothi azongenela i-30th BARCELONA COMIC ROOM Umncintiswano uzoba nababhali abakhulu abavela kuwo wonke ...
Umuntu angacabanga ukuthi ukuthumela uhlu lwezincwadi luka-2011 kuyindlela ejwayelekile kakhulu. Kepha empeleni,…
Kule bhulogi yezincwadi ngike ngazama kokunye okuthunyelwe, ukuphatha amahlaya njengengxenye yemibhalo. Kokunye…
Ngempelasonto efanayo e-Almería kubanjwa i-International Comics Conference futhi lokho kuyenza ...
UJosep Domingo del Calvario “Nadar”, owine uhlelo lwesine lwezifundo zamahlaya ezihlanganisiwe zase-AlhóndigaBilbao. EMpumalanga…
I-Last Manga Fair izobanjelwa eLa Farga de L'Hospitalet de Llobregat, futhi kungani ungayi ...
Nge-Entrecomics sifunde ngokuqokwa kwakamuva kwama-Harvey Awards ahlonishwayo, namanye amaphuzu avelele. Kwami…
Isizukulwane se-nini, lelo gama elilahliwe lapho "abavuthiwe" basilahla ngalo, okusho ukuthi "funda noma ...
Ngaphezulu kwezinsuku ezintathu, lezo ezisuka namuhla ngoLwesihlanu 20 kuze kube yiSonto elizayo 21 le ...
Ngemuva kwezinhlelo ezine, isimemezelo se-V Edition ye-FNAC-Sins Awards sasingaphuthelwa ngalesi sikhathi ...
Angikwazanga ukuyeka ukuphawula ukuthi namhlanje, uLwesine, Ephreli 14, umcimbi we-comiquero par excellence uqalile e ...
Kusuka eNewsarama sithole ngabaphakanyiselwe ama-Eisner Awards ahlonishwa kulo nyaka, i-DC ihamba phambili ...
Umncintiswano wezincwadi we-CASA EOLO 1. ISIHLOKO NOBULILI. Ingqikithi nohlobo luzoba mahhala, lwamukele zonke izinhlobo zemisebenzi ...
Ngesonto elizayo, wonke umuntu odabula iMadrid uzoba nethuba lokubamba iqhaza ekugujweni kwe ...
Ngempelasonto ezayo abalandeli bamahlaya baka-Irún basenhlanhleni, ngoba uhlelo lwesithathu lwe ...
Imiklomelo yeHarvey 2010
Abaphumelele kuma-Harvey Awards ahlonishwayo sebevele bayaziwa, kufaka phakathi labo abavunwa nguKirkman kanye ...
Njengeminyaka yonke, kumenyezelwe abaqokelwe ukuwina ama-Harvey Awards asemqoka emhlabeni wamahlaya….
Namuhla, ngoLwesine, ngoMeyi 13, iFourth International Comic Fair yaseHuelva iyaqala futhi lapha ngikushiya ne ...
Angazi noma ngizobe ngilungile, kepha ngemuva kokubheka okwedlule ababhali abaphambili baseSpain futhi ...
“… Kunezinto ezintathu empilweni abantu abangakwazi ukubalekela kuzo: ukufa, izintela kanye…
Kusuka ku-Blog de Cómics ngithola ukuthi ama-Diario de Avisos Awards asevele aklonyeliswa: Felipe Hernández ...
Nge-Entrecomics, nabaphumelele ngokugqamile: UMBHALI OBHALILE WOKUBHALA UKyle Baker, INAT TURNER, izincwadi zakwa-Abrams u-Ed Brubaker, uCAPTAIN AMERICA, Marvel ...
UMartín Cristal ubonakala ehambisana ngokuphelele nezimiso zomqondo owaziwa kakhulu othi wonke umlobi onekhono akungabazeki ukuthi ungumfundi onekhono kuqala.
Izolo kuphele umhlangano phakathi kwenani elikhulu lababhali, inhloso yabo bekuwukukhetha amanoveli ayishumi ahamba phambili eBolivia ...
ILectura + yisinyathelo esihlose ukushicilela iqoqo lezincwadi ikakhulukazi ezicabanga ngabantu abanezinkinga zokubuka.
Ukuthi konke lokhu kwenzeke ngencwadi efana no-1984 kuseyindida ehlekisayo.
Akuyona into enhle, engakaze ishiwo kangcono, ukuthi umsebenzi oqediwe, oyindilinga wokubhala umfishane kangangokuba usebenza njengesihloko sombhalo okhuluma ngokwawo?
Akuyona i-tinto de verano, noma ubhiya emasimini. Isiphuzo senkanyezi sesikhathi sasehlobo, ngesikhathi seGolden Age, kwakuyilodge, isiphuzo esithambile.
Kubonakala kuma-Entrecomics: U-AlhóndigaBilbao umemezele igama lalowo ozophumelela umfundaze wamahlaya we-AlhóndigaBilbao wesibili….
UFernando del Álamo, umbhali we-Historias de la Ciencia, uphendula imibuzo kule ngxoxo ngamafuphi nangokuchazayo.
Nge-Entrecomics, sithole abaphakanyisiwe kulo nyaka kuma-Eisner Awards ahlonishwayo (njengoba kuchazwa njalo ku ...
Imibono yesikhathi samanje esebenza, kusuka kwifilosofi, emiqondweni efanele i-Aesthetics nomqondo wobuciko ...
Kulo nyaka iMyaku Association ihlela omunye umncintiswano wamahlaya njengaku-2008, futhi yize ...
Sekukhona iphosta ye-III Encuentros con el Cómic de Ávila, ka-Alberto Sobrino. Izinsuku ezikhethiwe ...
Hhayi-ke, lelo thuba lesibili lokuwina lo mfundaze omnandi selivele liyaqhubeka, esandleni somkhandlu wedolobha ...
URaffaella Salierno uqondisa iKomidi Lababhali Ababoshwe bePEN Català, isigaba seCatalan se-International PEN
UManuela Sáenz bekunguthando olukhulu lokugcina loMkhululi, uDon Simón Bolivar. Wamphelezela eminyakeni eyisishiyagalombili edlule, ...
Okuthile okungidonsele amehlo ngukuthola izincwadi phakathi kukaJames Joyce nonkosikazi wakhe uNora Barnacle….
Umbhali ongachazeki wethalente lakhe, ngentelezi yakhe enhle efakwe ekusetshenzisweni kwesenzo, uWilliam Faulkner. Futhi lapha…
U-Leo Nikolayevich Tolstoi, noma uLeon Tolstoi njengoba aziwa kangcono, wazalwa ngo-Septhemba 9, 1928, wadlula emhlabeni ...
Enye yama-anecdotes eyangithokozisa kakhulu ngaleso sikhathi, lapho ngiya ocwaningweni ngalo mlingiswa othile, ...
Umbhali wemidlalo yeshashalazi, imbongi, umbhali wesikrini kanye nesishoshovu sezepolitiki uHarold Pinter ushone ngoLwesithathu olwedlule mhla zingama-24 eneminyaka engama-78 ubudala, eyisisulu somdlavuza.
Yebo, sekuvele kwethulwe izisekelo zoMncintiswano Wesine Wokuhlelwa KukaNorma Wokuhlela. Isikhathi sokwamukelwa siphela ngo ...
“Ngale ndlela, ngifunde ukubhekana nesipiliyoni ngasinye esingesihle njengesifundo esisha esivumela, ngokushesha, ukwenza ...
Kusuka kuma-Entrecomics: IZINSUKU ZE-XI ZOMHLABA ZONKE ZE-ALMERÍA ZIFIKILE Ngenhlangano ye-Andalusian Cultural Association Collective ...
UFederico García Lorca ubuyile ezindabeni. Ngesikhathi lapho ubulungiswa baseSpain butadisha ukuthi kungenzeka yini kwenziwe ...
Kusuka kuma-Entrecomics: Izisekelo zomncintiswano wamahlaya, okuhloswe ngazo kubantu abasha abaphakathi kweminyaka eyi-9 nengu-17 ubudala kanye nezakhamizi zase-valava, ...
ULuiz Ignácio Lula da Silva, umongameli waseBrazil, kanye nomlobi waseMexico uCarlos Fuentes, bathola ezandleni zenkosi ...
I-movie premiere yefilimu izaba esizisebenzisayo namhlanje ukukhuluma ngencwadi e ...
Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokumenyezelwa kwegama lomnqobi weNobel Prize ezincwadini, ...
Imithetho Yomnqamulajuqu Womncintiswano Wamahlaya Wama-V EXPOCÓMIC kuze kube ngu-Okthoba 24, 2008 I-Spanish Association ...
«I-Tebeos Collective ukukhumbula iminyaka eyishumi nesithupha yesisekelo sayo kanye nokwethula eNgqungqutheleni ye-XI ...
Umbhalo wesiHeberu owawuntshontshwe eminyakeni engaphezu kwengu-10 edlule utholakele. Umbhalo obizwa ngeNcwadi ...
URay Bradbury wazalwa ngo-1920 edolobheni laseWaukegan, e-Illinois. Ubuntwana bakhe bachitha kuleli dolobhana elincane lapho kuphela ...
Ngo-Okthoba, kuzoqala ukudayiswa incwadi entsha kaMichael Moore, umhlahlandlela kaMike wokhetho ngo-2008.
UJunot Díaz ungumbhali wokuqala waseDominican ukuwina umklomelo wePulitzer, umklomelo njengeNyakatho Melika njengababhali ...
Namuhla (kuze kube manje) inoveli yokugcina yombhali uJohn Grisham, Isikhalazo, iyaqhubeka nokuthengiswa eSpain. Kukhona okuhle ...
UJuan Carlos Onetti wazalwa ngoJulayi 1, 1909 eMontevideo. Ubaba wakhe wayebizwa ngoCarlos Onetti futhi ...
UMarcel Porust wazalelwa eParis ngo-1871 futhi washona edolobheni elifanayo ngo-1922 (ngakho wayengowaphezulu ...
Kukhululwe incwadi entsha ekhuluma ngoBarack Obama. Le ncwadi ibizwa nge-Obama Nation, iyi ...
IPlaneta DeAgostini imemezela Umklomelo Wayo Wokuqala Wamahlaya ngenhloso yokukhuthaza ukwakhiwa kwamaphrojekthi aphezulu ...
UJohn Updike wazalelwa ePennsylvania, e-United States ngo-1932. Uma bekufanele uchaze umsebenzi wakhe ngebinzana ubungathi ...
Ezitatimendeni zakamuva ku-ejensi ye-EFE, umbhali wasePeruvia u-Alfredo Bryce Echenique wenze izitatimende eziningi okufanele zibuyekezwe….
Ngonyaka wesine olandelanayo, iLas Jornadas Culturales izokwenzeka lapha (kusuka lapho lo mlingiswa ekubhalela khona) eMalaga ...
UWillian Faulkner wayengumbhali waseMelika owazalwa ngo-1897 esifundazweni saseMississippi. Umndeni wakhe wawungumndeni wendabuko oseningizimu ovela ...
UMario Vargas Llosa ukuqinisekisile ukuthi "kunenkululeko eyodwa kuphela futhi kumele isebenze ngasikhathi sinye kuyo yonke imikhakha." Umbhali wasePeruvia ...
Ubuwazi ukuthi u-Ernest Hemingway wazalwa ngo-1899? Ubuwazi ukuthi u-Ernest Hemingway wayenobudlelwano obubi nonina? Babazi ukuthi u-Ernest ...
Kusuka kwaTirafrutas sithola izindaba ezimnandi: Ngemuva kokuphumelela kokuqala kokuqala konyaka odlule, uFnac no-Ediciones…
Kusuka kwaTirafrutas sithola izindaba ezilandelayo: IGaldakao City Council ihlela umncintiswano weXIX Galdakao Comic, nge ...
UWalter Riso ungumbhali owazalelwa eNaples e1951, esemncane abazali bakhe bathutha naye baya ...
UCharles Bukowski, kwabaningi, ungumbhali ongcono kakhulu emlandweni wesintu. Futhi kungukuthi, ngokungangabazeki, uma sithwebula ...
UFrancisco Pérez Martínez, owaziwa kangcono njengoFrancisco Umbral, wazalelwa eMadrid ngoMeyi 11, 1935 futhi washona e ...
Udaba lwabashicileli bama-manga eSpain luyavutha, sekuvele kunabaningi abajoyine ...
Izindaba ezimnandi zomhlaba wamahlaya, ngoba uCaja Mediterráneo usekela umsebenzi wabadali abancane kusuka ...
Ku-Entrecomics sifunde ngezinye izingqungquthela ezweni lethu, kulokhu kumayelana nokuhlangana kwe-II nge ...
Izindaba ezimnandi kithina esihlala eMalaga njengami. Futhi yilelo sonto elizayo (Kusuka ku-19 kuye ...
IBabelia, isengezo samasiko e-El País, isinika kumagazini wanamuhla indaba engashicilelwe nguCortázar. Umcabango owodwa ...
Uma uvuka uzizwa sengathi umusha. Awukaze ucabange ukuthi umbhede wekhulu le-XNUMX ungakhululeka kangako. Itiye…
Izolo, ngosuku lweholide lethu likazwelonke, sigubhe ukufika kukaChristopher Columbus eMelika, isenzo sasolwandle esasiqonde ...
Nge-Entrecomics singakunika uhlu lwemiklomelo ye-Harvey 2007. Esigabeni ngasinye ku ...
Futhi omunye umcimbi, kulokhu uhlobene namahlaya wezithombe, ngoba kungumbhalo wokuqala we ...
Kuwebhusayithi yeFICOMIC bashicilele izisekelo zomncintiswano weCosplay weXIII Manga Fair ozoba ...
Njengoba bengingeke ngibhekise engqungqutheleni eyenzeka e-Alcorcón yethu ethandekayo, angifuni ukubeka ...
Njengoba ukwazi ukubona kuwebhusayithi yomshicileli iSins Entido, ngenhloso yokukhuthaza nokukhuthaza ...
Futhi siyaqhubeka nemicimbi, kulokhu uhlelo lwe-XI lweCangas Comic Fair, olubalwa ababekhona ...
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kumenyezelwe abaqokelwe ama-Harvey Awards kulo nyaka ... kanjani? Awazi ukuthi imiphi ...
Kungabi ngaphezulu noma ngaphansi kukaNaruto Uzumaki, uma iDragon Ball idale umuzwa futhi bekuyimanga yokubhekisela kule minyaka eyishumi ...